Ka Fiirso Intaadan Falin Shacabka Reer Puntland . W/Q Farhan Yasin Mire isqootax
Friday, November 9th, 2012 at 02:12 pm	/ No Comment Maxay Soomaalidu u dhaafi la,dahay Qabiil? W/Q Abdikadir Dahir Farah
Thursday, November 8th, 2012 at 02:26 pm	/ 5 Comments Gaasow gaas ha ku shubin Puntland. W/Q Xildhibaan Xuseen khalif Xaaji
Wednesday, November 7th, 2012 at 02:17 pm	/ 73 Comments Golaha wasiirrada maxaa lagu saleeyay?! W/Q Axmed-yaasiin Max'ed Sooyaan.
Tuesday, November 6th, 2012 at 06:59 am	/ 29 Comments Talo ku socota Dowladda Soomaaliya. W/Q Dahir Mohammed Sheikh Mohammed
Monday, November 5th, 2012 at 06:21 am	/ No Comment Friday, June 29th, 2012 at 10:04 pm Muuse Cali Jaamac: Hoggaanka Puntland Ka Jira Sumcad iyo Karaama Kuma Laha Dadka, Reer Puntland-na Waa Isbedel Doon (Dhageyso Wareysi Qeybta 2aad)
Prof Jawaari oo Ku Baaqay In La Difaaco Qaranimada Soomaaliya, Madaxweynahana Weydiistay Inuu Baarlamaanka Hor Yimaado “Si uu Uga Warbixiyo Cida Ka Talisa Kismaayo”
Galmudug Oo Shaacisay Inay Maamul U Samaysay Hobyo Iyo Deegaanno Kale
Xildhibaano Kor U Dhaafaya 30-Mudane Oo Ku Goodiyay Inaysan Codka Kalsoonida Siin Doonin Xukuumadda Cusub
Wasiirka Maaliyada Iyo Qorshaynta Oo Baarlamaanka Ka Codsaday Inay Fursad Siiyaan Xukuumada Cusub
Raysal Wasaaraha Soomaaliya: Waxaan Rajaynayaa In Dhamaanba Mudanayaasha Baarlamaanka Ay Codka Siiyaan Xukuumadaan
Wariyaal Ku Dhawaad 40-Saacadood Ku Xayirnaa Kismaayo Oo Dib Ugu Soo Laabtay Muqdisho
Tababare Fartuun Cismaan : “ Waa Macallin ku dayasho mudan ”
QM Oo Diiday In Dhaqaale Lagu Bixiyo Maraakiinta Dagaalka Kenya Ee Ku Sugan Xeebaha Soomaaliya